Tsy mahomby ny haino aman-jery satria tsy fahampian'ny finoana irery | Martech Zone
Omaly aho dia nifampiresaka tsara Brad Shoemaker, manam-pahaizana momba ny haino aman-jery ao an-toerana manana tantara lava be manandrana misintona ny radio amin'ny vanim-potoana dizitaly. Sendra nisy namana hafa, Richard Sickels, niditra tao amin'ny birao. Richard dia nanana tantara tsara tamin'ny radio ihany koa. Niresaka taonina iray momba ny indostrian'ny radio izahay ary nanohy nieritreritra izany halina.
As fivarotana rivotra mitohy mihena ary mitohy ny firaisankina sy ny fanamafisam-peo ataon'ny empira radio, tena manondro ny olana eo afovoan'ny haino aman-jery nentim-paharazana… tsy mino ny tenany intsony izy ireo. Mino aho fa io no olana mitovy amin'ny gazety sy fahita lavitra. Raha tokony hampiasa manokana, hampisaraka, handray ireo teknolojia eo an-toerana sy sosialy… ireo indostria ireo dia mihetsika hatrany amin'ny lalana mifanohitra amin'izany. Izany dia miteraka elanelana misy eo amin'ny loharanon'ny fampahalalana sy ny mpanatrika manandrana mifandray.
Ny fanamafisana sy ny syndication dia andian-teny mahomby amin'ny tontolon'ny asa. Mitovy dika amin'ny fitsitsiana vola izy ireo. Raha mampifantoka ny talentanao sy manitatra ny tratrany ianao, dia lojika ihany raha ahenanao ny fandaniana amin'ny taranaka atiny. Mihetsika ny kintan'ny firenena ireo onjam-peo ary avelany banga ny onjany. Manohy manery ny lahatsoratra Associated Press ny gazety ary mampihena ny mpiasa ao an-toerana. Mitohy ny fifanakalozana talenta amin'ny fahitalavitra eo amin'ny tsena ary fahamaroan'ny varotra.
Satria tsy mino ny talenta intsony izy ireo. Raha nampianatra zavatra na inona na inona antsika ny media sosialy sy ny bilaogy dia ny fiakaran'ny votoaty marobe, manokana, mizarazara ary be fientanam-po no mitombo fa tsy mihena. Ny olona dia mitady vaovao bebe kokoa, tsy latsa-danja amin'izany, ny fiainany, ny fialamboliny, ny orinasany ary ny governemantany. Tsy nirongatra ireo mpampita vaovao noho ny haitao, nirongatra izy ireo satria mino ny tenany.
Aza mijery lavitra noho ny tranokala mahazatra ary mitovy amin'ny banga taloha… votoatin'ny votoaty mijanona eo afovoan'ny ranomasina dokambarotra manelingelina. Ny dokam-barotra bebe kokoa dia midika hoe mahazo vola bebe kokoa, sa tsy izany? Tsy mety. Izy ireo no mamoaka ny atiny izay manome lanja indrindra anay. Ary ankehitriny ny sandan'ny atiny antonony omen'izy ireo dia mihena hatrany. Averina… tsy noho ny mpanelanelana, fa noho ny filan'ny feo ao aoriany.
Ireo onjam-peo, indrindra, dia tompon'ny kalitaon'ny feo, fialamboly ary fanatonana manokana. Maninona izy ireo no mifantoka hatrany fivarotana rivotra raha tokony ho fivarotana feo dia mihoatra ahy. Tokony ho afaka hiditra amin'ny onjam-peo rehetra aho ary hahita ny vidiny hanampiana ny orinasa hampivelatra ny fandaharan-dry zareo manokana, hizara izany programa izany amin'ny alàlan'ny rindranasa finday sy tranokala ary hitarika fidiram-bola amin'ny orinasan-dry zareo amin'ny alàlan'ny famaritana, ny fikendrena ary hahatrarana ireo mpihaino marina. Tsy mila mihazakazaka amin'ny onjam-peo akory ireo seho! Tsy misy dikany ny mpanelanelana… ny finoana mavitrika amin'ilay feo re fa zava-dehibe.
Tsy azoko antoka fa misy fanantenana ho an'ny gazety - ny fotodrafitrasa ilaina hanohizana fanontana amin'ny hazo maty sy hizarana izany atiny izany dia lafo loatra. Tokony hanary ny milina fanontam-pirinty izy ireo ary hampiasa ny volany amin'ny talenta eo an-toerana hametrahana indray ny sandan'ny asa aman-draharaha maty. Toa ny fahitalavitra ihany no manana fanantenana… mandray ara-tsosialy ary manosika ny mpampahalala azy ireo amin'ny alàlan'ny mpampita vaovao manantena izany. Tiako ny mahita azy ireo manokatra varavarana ho an'ny orinasa sy ny mpanjifa izay maniry hampiasa horonantsary, tsy misy fambara antso, hamokarana, hizara ary hanome vola ho azy ireo ihany koa ny lahatsarin'izy ireo.
Tiako ny haino aman-jery nentim-paharazana ary manohy mino ny herin'ny olona ao ambadik'ireo mpampita vaovao ireo. Maniry fotsiny aho hino ny tenany.
Fanamarihana: Mamaky aho Eulogy ho an'ny Twitter momba ny fihenan'ny fifandraisana Twitter. Mampihomehy, nahita fanambarana an-gazety aho andro vitsivitsy talohan'izay izay niresaka momba ny Twitter fitomboana… Mpampiasa 14 tapitrisa hafa. Matahotra aho sao hanaraka ny dian'ny haino aman-jery nentim-paharazana ny Twitter, mifantoka amin'ny eyeballs fa tsy ny kalitaon'ny fampahalalana omeny. Manantena aho fa tsy… fa ho hitantsika eo.
Tags: minofitorahana bilaogygazetyonjam-peohaino aman-jery sosialyfahitalavitra